Ukungcungcuthekiswa kwamanzi-Uhlalutyo lweAnalogy luya kwiBhulorho kude kakhulu | Martech Zone
Ukungcungcuthekiswa kwamanzi-Uhlalutyo lweAnalogy luya kwiBhulorho kude kakhulu
Idatha, njengamanzi, iza ngeendlela ezininzi. Ingqondo yomntu iguqukile ukucoca uninzi lweedatha eziza kuthi kuba kuninzi kakhulu.
Xa uvula amehlo kunye neendlebe, idatha ikuyo yonke indawo. Umbala wodonga, isandi somoya opholileyo kunye nevumba lekofu yommelwane wakho ziphathwa njengokufuma. Amanzi asemoyeni ngalo lonke ixesha kodwa ayiloncedo ukuhoya kakhulu.
Xa amanzi edibana enkungwini, kunyanzela ukuba uwabone kwaye wenze ukuqonda umhlaba okujikelezileyo kube nzima ngakumbi. Ii-database ezingagqitywanga, idatha eyonakeleyo, inzululwazi embi, izigqibo ezingamanga kunye nokukhetha ukuqonda konke kukwenza ulahlekelwe yindlela yakho enkungwini.
Idatha iyawa njengemvula. Xa kukho intwana nje, ayonelisi- ngokwaneleyo ukuze imoto yakho imdaka kwaye iyabhida incoko. Uzifumana usula ibala kwiiglasi zakho njengoko umntu ekhupha inqaku ledatha engahleliwe, efunyenwe kumthombo othile ongaziwayo.
Amanzi amdaka kwidama elinzulu kuyingozi. Idatha, eqokelelwe kunikezelo olungathembekiyo, engacocwanga okanye eyenziwe yesiqhelo kwaye ishiywe ukuba ikhule imile, inokukhokelela kwizigqibo eziphosakeleyo.
A ukuzinza okuthe chu Amanzi anokwanela ukugcwalisa inkantini okanye agcine indalo. Ngamanqaku amathathu edatha (inani leimeyile ezithunyelweyo, xa kuthelekiswa nokuvulwa, xa kuthelekiswa nokucofa) zinokugcina inkqubo yentengiso.
A ukuhamba kakuhle yedatha ngohlobo lomfula omncinci ingasetyenziselwa ukuhlamba. Ukuhamba kwedatha okuqhubekayo kuvumela umlinganiso kunye nothelekiso lwembali. Ukulungiswa kwephepha lokufika kunokufezekiswa ngedatha yokuguqula okuzinzileyo.
A umlambo othobekileyo uyakwazi ukufaka amandla okusila ekuboneni iinkuni okanye ukugaya ingqolowa. Injini yengcebiso ifuna kuphela igalelo elinokuthenjwa elivela kwimbinana yeerhafu ukubonelela ngexabiso elonyukayo kwiinqwelo zokuthenga.
A impompo Inokuqhubela isondo elikhulu lamanzi kunye nokuhamba okwaneleyo kolwazi kunokuqhuba ixesha lokwenyani, inkqubo yomxholo onamandla.
A umlambo Ibanzi kwaye inzulu ngokwaneleyo inokuxhasa ishishini lezothutho liphela. Idatha eyaneleyo inokuhamba ngeebhegi kunye neenqanawa zemithwalo ezimile kwingqokelela yeicookies ezivela kuthungelwano lwentengiso, inkqubo yedatha yekhadi lokunyaniseka kunye nabathengisi beenkcukacha.
Xa idatha ifika kwixabiso elilindelweyo ngamaxesha alindelweyo, inokufakwa, ihanjiswe kwaye isetyenziswe. Iinkqubo zokunkcenkceshela, amadama kunye nemithombo yolondolozo ibonelela ngemvakalelo yokulawula kwaye ivumela ulwakhiwo lwezixhobo ezandisa ukwanda ngemijelo, izitshixo kunye namadama. Oovimba beenkcukacha bakhiwe kukungathembeki okuncinci.
Ukucoceka kukulandelayo kukuhlonela uThixo
Amanzi acocekileyo abalulekile kwimpumelelo yobomi, ukunkcenkceshela, ukuhambisa izityalo, njl njl. Inkcazo 'yococeko' inokutshintsha ngenjongo; Kulungile ukuba kukho ulwelwe emanzini olupholisa isityalo samandla kwaye ayamkelekanga ukuba kukho ngaphezulu kwe-10 yeebhiliyoni ze-arsenic emanzini okusela.
Idatha iyafana. Kwiposi ethe ngqo yesicelo, nokuba unesihloko somntu (Mnu. Nkskz. Nks.) Ayibalulekanga… ngaphandle kokuba uthumela oogqirha. Kodwa idatha engcolileyo iya kukukhubeka rhoqo.
NjengoSosayensi oyiNtloko weDatha, DJ Patil, yibeke kwiNgqungquthela yokuQala ye-CTO, "Ukuba awucingi ngendlela yokugcina idatha yakho icocekile kwasekuqaleni, f ^ ¢ & ed. Ndiyakuqinisekisa. Ukuzama ukuyicoca emva kwenyani kuya kuthatha iinyanga ubuncinci. ”
Ukuba ufudumeza amanzi kwindawo yokubilisa, inokubangela uguquko kwiMizi-mveliso. Idatha ibonakala isenza into efanayo. Ukusukela ngexa iikhompyuter zinokugcina kunye nokubala, idatha sele iqokelelwe ngokukhawuleza njengoko izixhobo zokugcina zinokwenziwa ukwenza njalo.
Njengokuba idatha evela kulomrhaji idlula kwiinjini zokusila, konke kuphelela echibini, ngasemva kwedama. Njengoko idatha ikhutshelwa ngendlela elawulwayo, igunyazisa iiturbines zeshishini ledatha; ezo zinjini zikhulu zokulungiswa kwedatha ngamagama afana noGoogle noFacebook. Akusayi kubakho mbalela apha.
Kwaye, okokugqibela, kukho ichibi lamanzi anzulu, elilindele umhlalutyi ukuba angene ngaphakathi. I-Scuba gear kunye nomkhonto womkhonto ngesandla, umhlalutyi uphanda ubunzulu, iimephu zomhlaba omtsha kwaye ufumanisa iintlobo ezintsha. Lixesha elinomdla kakhulu lokuba ngumhloli weedatha.
Kungenxa yoko le nto uninzi lwabo lubonakalise Ingqungquthela ye-eMetrics ukusukela ngo-2002. Ithuba elilandelayo liseBoston, nge-27 kaSeptemba ukuya nge-1 ka-Okthobha ka-2015.
Ubhaliso lwengqungquthela ye-eMetrics
Kwaye malunga namandla edatha yokukrola iGrand Canyon elandelayo? Kuthekani ngokunyibilika komkhenkce wedatha eyakhiweyo? Siwajonga njani amanzi amdaka kwihlabathi eliya liba nemfihlo ngakumbi nangakumbi?
Leyo yimibuzo yelinye ixesha kunye namanzi phantsi kwebhulorho.
tags: UhlalutyoIinkcukachaukucoceka kwedathayesayensi yolwaziIifayileingqungquthela yeemetric
UJim Sterne ngumcebisi welinye ilizwe ojolise ekulinganiseni ixabiso lokudala kunye nokomeleza ubudlelwane kubathengi. USterne ubhale iincwadi ezisibhozo kwintengiso yokunxibelelana, nguMongameli oSekwayo kunye noSihlalo wangoku we Umbutho weDigital Analytics kwaye ivelise Ingqungquthela ye-eMetrics kwaye i Ingqungquthela yeMedia Analytics.
Ngaba iQhosha lokuThenga liza kunceda ukuNikezelwa kweendaba zeNtlalo kunye ne-ROI?
Umgangatho vs Ubungakanani besiqulatho: I-ROI ekubhaleni okuncinci